Toyota လုပ်ငန်းသုံးယဉ် ရောင်းရန် Carmudi Myanmar [Burma]
Changan Clark Daihatsu FAW Hino Honda Hyundai Isuzu Iveco Kia Mazda Mitsubishi Nissan Subaru Suzuki Toyoace Toyota Zhong Tong
2007 Toyota Toyoace toyoace
Lks 1,750,000 ညှိနှိုင်း
KLO Trading Auto
This Silver / Grey Toyota Toyoace toyoace 2007 toyota is exceptional value at just 1750000 Lks. The car hasaManual transmission system and has traveled 200000km to get to you. You won't finda...
Lks 18,500,000 ညှိနှိုင်း
ရှေဘာတာ​နောက်​​လေး​/ japan အော်အတိုင်း / 2008 12​ပေ 2တန်​ NO4Cအင်​ဂျင်​
2006 toyoAce 12​ပေ ​ရှေ့​လေး​နောက်​​လေး​ဘေးကပ်​ SO5Dအင်​ဂျင်​ 4800cc manual
White Toyota Townace 2007 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Casse...
White Toyota Townace 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Casse...
Golden Chance Co., Ltd.
White Toyota LiteAce Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KM75-0014350) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ A...
Toyota Townace 2005
White Toyota Townace 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KM75-1001779) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag...
Silver Toyota LiteAce Truck 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ (ချယ်လ်စီးနံပါတ် KM75-1000124) သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Radio. ဖော...
Toyota Townace 1 Ton 1988
Shwe Kyar Pan
White Toyota Townace 1 Ton 1988 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Radio. ဖော်ပြပါကားသည် ဆီစားသက်သာစေနိုင်သော...
Silver Toyota LiteAce 2008 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Cassette Radio. ဖော်ပြပါကားသည် ဆီစားသက်သာစေနိုင်သော Pet...
White Toyota TownAce 2005 မော်ဒယ် ရောင်းရန်ရှိသည်။ သက်တောင့်သက်သာစီးနင်းနိုင်၇န် ဇိမ်ခံပစ္စည်းများ ပါဝင်သည်။ A/C: Front. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစနစ်များ ပါဝင်သည်။ Airbag: Driver. အသံစနစ်ပါဝင်သည်။Casse...
တိုယိုတာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
တိုယိုတာ အမှတ် တံဆိပ် ထဲကနေ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များလည်း အများအပြား ဝင်ရောက် ပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ အများဆုံး လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် ဝင်တဲ့ အမှတ်တံဆိပ်ထဲမှာလည်း ပါဝင် ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူက ကုန်တင်ကား အကြီးစားထက် အလတ်စား ထရပ်ကားတွေ ပိုများ ပါတယ်။ မြို့တွင်းနဲ့ နယ်ခရီးတို သွားတဲ့ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များကို တိုယိုတာ အမှတ်တံဆိပ် ထဲကနေ ရရှိ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသစ် များလည်း ဝင်ပေမယ့် အများစု ကတော့ အဟောင်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းသုံး တိုယိုတာကားများအပြင်အခြားသော ကားတံဆိပ်များဖြစ်သည့် မစ်ဆူဘီရှီ နှင့် ဒိုင်ဟတ်ဆူ ကားများလည်း မြန်မာ့ကားဈေးကွက် အတွင်းအတော်များများတွေ့နိုင်ပါ ပြီ။
နာမည်ရ တိုယိုတာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များ
တိုယိုတာ စူပါ ကတ်စတန် ကို အတော် များများ သိကြ ပါတယ်။ ဘုရားဖူး ယာဉ် အဖြစ်လည်း အသုံးပြုကြပြီး တစ်ချိန်တုန်းက သိန်း ၅၀၀ အထက်တွေ ရှိခဲ့ဖူးပေမယ့် ယနေ့မှာ သိန်း ၁၆၀ ဝန်းကျင်နဲ့တင် ကားသန့် ကားကောင်း တစ်စီး ရနိုင် ပါတယ်။၂၀၀၀ ခုနှစ်အောက် မော်ဒယ် ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၇ ခုနှစ် တို့လို မော်ဒယ် မြင့်ရင်တော့ သိန်း ၂၀၀ နဲ့ ၃၀၀ ဝန်းကျင်ကြားက ရနိုင် ပါတယ်။ ကားသန့် တွေ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် အားဖြင့် ၃၀၀၀ စီစီ ရှိပြီး အော်တို ဂီယာ စနစ် အသုံးပြုတဲ့ကား ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို ကုမ္မဏီ ရုံးလုပ်ငန်း တွေမှာ အသုံးပြု ကြသလို၊ ဘုရားဖူး ခရီးတွေမှာလည်း အသုံးများ ပါတယ်။ စူပါ ကတ်စတန် ကို အခြား အမည် တစ်ခု အနေနဲ့ ဟိုင်းအေ့ လို့လည်း ခေါ်သေးပြီး ဟိုင်းအေ့ မှာတောင်မှ ဂရန်း ဟိုင်းအေ့၊ စူပါ ဟိုင်းအေ့ အစရှိသဖြင့် အမည် အမျိုးမျိုး အင်ဂျင်နဲ့ ဘော်ဒီ စတိုင် အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုလို့ ထုတ်လုပ် ပါတယ်။
တိုယိုတာ ဒိုင်နာ လို ကားများလည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။ သူက အလတ်စား ကုန်တင်ယာဉ် ဖြစ်ပြီး နောက်မှာ သံသတ္တာ ခန်းတွဲကြီး မပါရင်သိန်း ၁၂၀ ဝန်းကျင်နဲ့တင် ရနိုင် ပါတယ်။ ဈေးကတော့ အကျ ဘက်ကို သွားနေတာပါ။ ဒီထက်လည်း ကျနိုင် ပါသေးတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၂၅၀၀ စီစီ ဝန်းကျင်တွေ ထုတ်လုပ်ပြီး ဓာတ်ဆီ ကားများကို ပိုမို မြင်တွေ့ နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေ့မှာ လူသုံးယောက် စီးနိုင် ပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုး ကတော့ တိုယိုတာ လိုက်အေ့ ဖြစ်ပြီး ရန်ုကုန်မှာတင် မက နယ်ဘက်တွေမှာလည်း ကုန်ပစ္စည်း တင်ဖို့ အတွက် အမှာများ အဝယ် များ ပါတယ်။ အင်ဂျင် အရွယ် ၁၈၀၀ စီစီ ရှိပြီး ဓာတ်ဆီ အမျိုးအစားကို ပိုမို ထုတ်လုပ် ပါတယ်။ ၂၀၀၇ လောက်အထိ မော်ဒယ်မြင့်တွေလည်း အဝယ်လိုက် ပါတယ်။
တိုယိုတာ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ် ဝင်ရောက်ပုံ
တိုယိုတာ လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်များလည်း ထိုင်းနယ်စပ် ကနေ ဝင်တဲ့ အပြင်၊ ဂျပန် နိုင်ငံ တစ်ပတ်ရစ် လေလံ ဈေးကွက် ကနေလည်း ဝင်ရောက် ပါတယ်။ ဂျပန် လေလံ ဈေးကွက်က ဝင်တာ ကိုတော့ ရန်ကုန်က အရောင်းစင်တာ၊ ပြခန်း တွေမှာ ဝယ်ယူ နိုင်ပြီး ဂျပန်လေလံ ကနေ တိုက်ရိုက် လေလံ ဆွဲပေးတဲ့ အေးဂျင့် တွေဆီ ကနေလည်း ဝယ်နိုင် ပါတယ်။ သမာရိုးကျ ကားပွဲစားတန်းတွေမှာလည်း ရနိုင်ပြီး မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တွေ အပြန်အလှန် ဝယ်ယူကြတဲ့ အလေ့အထလည်း ရှိပါတယ်။ အသစ် ကိုလည်း အဲ့ဒီတိုင်းပဲ မှယူ ပါတယ်။ အကြေင်းကတော့ လက်ရှိ ရန်ကုန်က တိုယိုတာ အရောင်းစင်တာမှာ လုပ်ငန်းသုံး တိုယိုတာ ကားများ မရရှိ နိုင်သေးလို့ ဖြစ်ပါ တယ်။ နောက် ဆိုရင်တော့ ရရှိ တော့မှာပါ။ Motors.com.mm ကနေလည်း တိုယိုတာ အမှတ်တံဆိပ် လုပ်ငန်းသုံး ယာဉ် အမျိုးမျိုးကို စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် လေ့လာ စုံစမ်း ဆက်သွယ် ဝယ်ယူ နိုင်ပါတယ်။